Nabadsugida iyo AMISOM oo dagaal xoog leh kadib la wareegay guryaha Axmed Daaci & C/llahi Sh. Xasan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada Nabadsuigadda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa saaka la wareegay guryaha ay degmada wadajir ee Muqdisho ka degan yihiin gudoomiyihii hore ee degmadaas Axmed Xasan Caddow (Daaci) iyo siyaasiga ay isku heybta yihiin ee C/laahi Sheekh Xasan Cali.
Dagaalka oo bilowday xaly qiyaastii 40:00 AM habeenimo ee wax yar ka hor salaadda subax ayaa qaboobay saaka abaare 8:00 AM ee xilliga Muqdisho.
Maleeshiyaad u daacad ah Axmed Daaci iyo C/llaahi Sheekh Xasan Cali ayaa dagaal xoog leh kala horyimid ciidamada Nabad Sugidda oo doonayey iney hubka ka dhigaan.
Saakaa waabarigii kadib waxaa dagaalka ku biiray ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM kuwaasoo wata gaadiidka gaashaaman.
Lama oga khasraaha ka dhashay dagaalkaas, hase ahaatee waxaa warar horudhac ah sheegayaan in dhimashadu faareyso ilaa 10 ka tirsan dhinacyadii dagaallay iyo dadka rayidka ah.
Gaadiidka gurmadka degdeg ah ayaa dad badan oo dhawaacyo qaba ka daadgureeyey qeybo ka mid ah xaafadaha degmada Wadajir, iyadoo dagaalku is qabsaday ka bilow Suuqa Weyn ilaa agagaarka Macmacaanka.
Goobjoogayaal deegaanka ah ayaa Mareeg Media u sheegay iney arkeen gaadiidka gaashaamna ee ciidamada AMISOM oo ku sugan guryaha Axmed Daaci iyo C/llaahi Sheekh Xasan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in labadan nin ee xalay la weeraray ay ka baxeen guryahooda oo ay aadeen dhanka deegaanka Jaziira, inakstoo wararkaas aan weli la xaqiijin Karin.
Axmed Daaci oo saaka ka hadlay weerarka lagu qaaday gurigiisa ayaa yiri “Weerar dulmi ah ayaa la igu soo qaaday, aniguna waan is-difaacayaa, mana ogi sababta la igu soo weeraray,”.
Axmed Daaci ayaa intaas ku daray in weerarka ay kusoo qaadeen ciidan ka tirsan kuwa nabasugidda dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, isagoo xusay in weerarka lagu soo qaaday uu yahay mid qayb ka ah weerarro lagu qaadayay dhawaanahan xildhibaannada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Sidoo kale siyaasiga C/llaahi Sheekh Xasan oo guddoomiye ka ah xisbi siyaasadeed ayaa isaguna ka hadlay weerarka lagu qaaday gurigiisa, wuxuuna yiri “Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ayaa nasoo weeraray xalay gellinkii dambe, mana garanayno sababta nalagu soo weeraray, iyaga ayaana laga doonayaa inay sheegaan sababta ay noosoo weerareen,”.
Siyaasiga C/llaahi Sheekh Xasan oo sii hadlayay ayaa sheegay in weerarkii xalay ay iska difaaceen, laakiinse saaka lagu soo qaaday weerar ka culus kii xalay dhacay, xaaladduna ay tahay mid dagaal.
Ma jiro warcad oo weli kazoo baxay dowladda Soomaaliya oo iyadu howlgalkaan fulisay, waxaase sarkaal u hadlay dowladd uu ku gaabsaday in arrintaan qeyb ka tahay qorshaha hubka looga dhigayo.
Ciidamada Nabadsugidda Soomaaliya ayaa horay ugu dhacay garaasha uu lahaa Marxuum Cismaan Xasan Cali (Caato) oo ku yaalla degmada Hodan, sidoo kale waxey dhawaan u dhaceen guryo ay lahaayeen Xildhibaan C/weli Maxamed Qanyare iyo Cabdi Nuurre Siyaad (Cabdi Waal).
Galeyr: Haddii Xamar aqoonsan weydo Khaatumo go’aan ayaan qaadaneynaa